Home News Xil.Cabdishakuur Cali Mire oo Maxaabiis Al-shabab ah ka sii daayey Xabsiga dhaxe...
Xil.Cabdishakuur Cali Mire oo Maxaabiis Al-shabab ah ka sii daayey Xabsiga dhaxe iyo dood ka dhalatay
Ilo wareedyo lagu kalsoon yahay aya MOL u xaqiijiyay in Xildhibaan Cabdishakuur Cali Mire oo ka tirsan Baarlamanka Federaalka Soomaaliya Aqalka hoose uu Xabsiga dhaxe ka sii daadey sedax maxbuus oo ka tirsan Ururka Argagaxisada ah ee Al-shabab oo qabiil ahaan ka soo jeeda beesha Mariixaan.
Xildhibaanada Cabdishakuur Mire oo ah nin awood balaaran ku leh Dowladda Madaxweyne Farmajo ahna Xildhibaan ay isku heyb yihiin Madaxweynaha ayaa waxaa uu qaab damaanad ah xabsida uga sii daayey labo amiir iyo sarkaal sare oo dhanka amniyaad ka ah oo la soo qabtey seddax bilood ka hor, Seddaxda Xubnood ee la sii daayey ayaa waxaa soo qabtey oo gacanta Dowladda soo geliyey Taliyihii NISA ee maalmo ka hor Xilka iska casiley sababo gaar ah aawgeed.
Xildhibaan Cabdishakuur Cali Mire ayaa adeegsadey awooda madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmajo iyo kusimaha agaasimaha NISA Fahad Yaasiin, waxaana la fududeeyey siideynta xubanaha shababka ah oo hadda loo haysto xeer ilaaliye ku-xigeenka kaasoo magaciisa lagu sheegay Abukaat. Maxamed Xasan Macalin oo ka tisan xeer ilaalinta Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.
Howl wadeeno badan oo ka tirsan Dowlada ayaa la yaaban awoodaha uu adeegsadey Xildhibaan Cabdishakuur, kalsoonida uu ku Qabo madaxweynaha iyo siyaabaha uu u adeegsadey awooda madaxweynaha oo aad u kala fog.
Ummada Soomaaliyeed ayaa waxaa ay rajo weyn ka qabtey Madaxweyne Farmaajo inuu yahay shaqsi Daacada ah oo wax badan ka qaban doona Dhibaatooyinka ka jira dalka, hase ahaatee waxaa nasiib daro noqotay sida ay wax u socdaan. La arki doonee sida ay ku dhamaato
Previous articleUrurka Al Shabaab Oo Sheegtay Dil Xalay Ka Dhacay Magaalada Muqdisho
Next articleGuddiga Joogtada ah ee Baarlamanka oo diidey in ay la fadhiistaan Ra’iisul Wasaare Kheyre. (Sababta)
Ex-Gudoomiye Taabid oo 10-Milyan oo Doolar Si Fudud Ku Qaatay ka...
Go’aanka Dowladda Soomaaliya Ee Qudus Maxaa kaaga Baxay??